Igumbi lokulala elinelanga elineflethi elijonge kwiDolomites
Iflethi ikwi-1,600 m kwimbali yeResidence Grand Hotel Carezza, engqongwe ziiNtaba zeDolomites, iLifa leMveli le-UNESCO. Iikhilomitha ezingamashumi amathathu ukusuka kwisixeko saseBolzano, apho idityaniswe yibhasi eqhelekileyo phambi kweNdawo yokuhlala, iCarezza (Karersee) yindawo efanelekileyo yeeholide ebusika nasehlotyeni. I-ski slopes yi-10 Min kuphela ukuvuka.
Le flethi ibandakanya indawo yokuhlala kunye negumbi lokutyela elinekhitshi langoku, igumbi lokuhlambela elineshawa, kunye negumbi lokulala elinebhedi enkulu. Iyakwazi ukuhlalisa abantwana aba-1 okanye aba-2 kwibhedi yesofa ephindwe kabini ebekwe kwigumbi lokuhlala. Ukongeza, i-Wi-Fi yasimahla, igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye negumbi lokudlala elinentenetya yetafile iyafumaneka kumgangatho ophantsi weNdawo yokuHlala.
Iikhilomitha ezingamashumi amathathu ukusuka kwisixeko saseBolzano, apho idityaniswe yibhasi eqhelekileyo phambi kweNdawo yokuhlala, iCarezza (Karersee) yindawo efanelekileyo yeeholide ebusika nasehlotyeni.
Ebusika, uCarezza unikezela ngaphezulu kwe-40 km yethambeka kunye ne-skiing enqumla ilizwe, ezikumgama nje omfutshane ukusuka kwiflethi. Izixhobo zokutyibiliza zingaqeshwa kwindawo leyo. Ehlotyeni, yiparadesi kwabo bafuna ukonwabela uhambo lokuphumla emadlelweni nasemahlathini, ukuhamba intaba, ukukhwela ihashe, ukudlala igalufa okanye intenetya.
Kukho iindawo zokutyela ezininzi ezikufutshane, kumgama wokuhamba, okanye ngemoto. Ivenkile encinci enazo zonke izinto eziluncedo ibekwe ngaphakathi kwiNdawo yokuHlala.
Andihlali eCarezza, kodwa ndiya kuhlala ndifikeleleka ngefowuni (umbhalo okanye umnxeba). URudy, umanejala wendlu ohlala kuyo, uya kufumaneka nanini na xa kukho imfuneko.